Best Forex Indicators for Trading July 2022 - Pros & Cons Uncovered
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 23 ဇွန်လ 2022
Forex အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အခါ အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက သန်းနဲ့ချီတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ကို နေ့စဉ် အက်ကွဲအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး - တချို့က တခြားသူတွေထက် ပိုအောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့် Forex အညွှန်းကိန်းများသည် အရေးကြီးပါသည်။
ကျေးဇူးတင်စရာသည်ထိုသို့သောစိန်ခေါ်မှုရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချမှတ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြရန်ကိရိယာများစွာရှိသည်။ အညွှန်းကိန်းများနှင့်ဇယားများသည်ကြိုက်နှစ်သက်သောစျေးနှုန်း၊ စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်နှင့်စျေးနှုန်းတို့၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစေသည်။
သင်စိတ်ကူးနိုင်သည့်အတိုင်း - ထိုကဲ့သို့သောအသုံး ၀ င်သည့်နက်ရှိုင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူသုံးစွဲခြင်းကကုန်သည်များအားစျေးကွက်ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှအသိပညာဗဟုသုတရှိစေသည်။
အသုံးပြုသောလူကြိုက်အများဆုံးကိရိယာတစ်ခုမှာ forex အညွှန်းကိန်းများဖြစ်ပြီးအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သည့် forex အညွှန်းကိန်း (၁၀) ခုကိုသင်ဖြတ်သန်းပြီးသင်၏ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုနောက်အဆင့်သို့သင်မည်သို့ပို့ဆောင်နိုင်သည်ကိုလေ့လာသည်။
Forex online ကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်စဉ်းစားခြင်းမပြုမီသင်၏နည်းဗျူဟာတွင်အကောင်းဆုံးအညွှန်းများကိုထည့်သွင်းသင့်သည်။
Forex ညွှန်ကိန်းများကဘာတွေလဲ။ ကောင်းပြီ, Forex ညွှန်းကိန်းသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သည်များကအသုံးပြုသောနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာတွင်ညွှန်းကိန်းများထည့်သည့်အခါသင်ကအတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဆန်းစစ်သည်။ ဤထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို 'နောက်ကျ' နှင့် 'ဦး ဆောင်ခြင်း' ကဲ့သို့သောညွှန်းကိန်းများတွင်တွေ့ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အကောင်းဆုံး Forex အညွှန်းကိန်းများသည် ကုန်သည်များသည် စျေးကွက်၏စွမ်းဆောင်ရည်၊ သမိုင်းဝင်၊ လက်ရှိစျေးနှုန်းဒေတာ၊ စျေးကွက်သဘောထားနှင့် ပမာဏကဲ့သို့သော အချက်အလက်များကို အပြည့်အဝဆန်းစစ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း သေချာစေပါသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် Forex ကိုအောင်မြင်စွာကုန်သွယ်ရာတွင်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအတွက်နည်းပညာဆန်းစစ်မှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
သင်မြင်သည့်အတိုင်းကုန်သည်များအတွက်အကူအညီများစွာရှိသည်။ အကောင်းဆုံး Forex ညွှန်းကိန်းများမှာနိုင်ငံခြားငွေကြေးရောင်းဝယ်မှု၏အခြားအချက်များအကြားစျေးကွက်စိတ်ဓာတ်ကိုခန့်မှန်းရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။
သင်၏လက်ချောင်းထိပ်ရှိရရှိနိုင်သည့်နည်းပညာညွှန်းကိန်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ကုန်သွယ်ရေး Forex ကိုအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်ရန်အခွင့်အရေးများစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်အများစုသည်သူတို့၏နောက်ကွယ်တွင်ခိုင်မာသောကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာရှိသည်ဟုကျိန်ဆိုကြသည်။
အရေးကြီးသည်မှာညွှန်ကိန်းများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုလေ့လာခြင်း ယခု မဆိုကဲ့သို့စတင်ရန်နေရာတစ်ခုကဲ့သို့ကောင်းသော။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းဆုံး Forex ညွှန်းကိန်း ၁၀ ခုပေါ်သို့ချောချောမွေ့မွေ့ရောက်စေသည် - သင်အားလုံးသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုနည်းဗျူဟာတွင်ထည့်နိုင်သည်။
1 - ဆွေမျိုးအင်အားအညွှန်းကိန်း (RSI)
Relative Strength Index ဖြင့် စတင်ခြင်း - ယေဘုယျအားဖြင့် RSI ဟု အတိုကောက်ခေါ်သည် - ဤညွှန်ပြချက်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကုန်သည်များအသုံးပြုသည့် ရေပန်းစားသော နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
သတိမထားမိသောသူများအတွက် RSI သည် oscillator အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်ကိရိယာများကိုညွှန်ပြသည့်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်သည်များသည်အရှိန်အဟုန်ကိုဖော်ထုတ်ရန် RSI ကိုအသုံးပြုသည်။
ဒီလှိုသည်လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်သိသာထင်ရှားသည့်မတူကွဲပြားသည့်အချက်ပြမှုနှစ်ခုလုံးကိုသရုပ်ဖော်ရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည် Forex စျေးကွက်.
အတိုချုပ်ပြောရရင် RSI ဆိုတာက quantification ဖြစ်တယ် အမြတ်အစွန်း စပ်လျဉ်းတန်ဖိုးကိုပိတ် အကျိုးရှိသော close value - ၀ နဲ့ ၁၀၀ အကြားပြောင်းသွားမယ့်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ပြတယ်။
RSI = 100 - 100 / (1 + RS) ။
RSI သည် ငွေကြေးဈေးကွက်တွင် အရှိန်အဟုန်ကို ညွှန်ပြသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Forex စျေးနှုန်းအတက်အကျများ၏ အလျင်ကို တွက်ချက်ရန် ဤအမျိုးအစား၏ အညွှန်းကိန်းများကို အသုံးပြုပါသည်။
ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်အရှိန်အဟုန်အညွှန်းကိန်းများသည်ရေတိုခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုတိုင်းတာသည်။ အထက်ဖော်ပြပါစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ၏ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ယေဘုယျကျန်းမာရေးကိုသရုပ်ဖော်ခြင်း - 'overold' နှင့် 'overbought' အချက်ပြမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း RSI သည် ၀ မှ ၁၀၀ အတွင်းရှိတန်ဖိုးကိုပြပြီးစျေးနှုန်းအတက်အကျနှင့်ရွေ့လျားသည်။
အကယ်၍ RSI စာဖတ်ခြင်းသည် ၇၀ ကျော်ပါက၎င်းသည်လုံခြုံရေးတွင်ရှိကြောင်းဖော်ပြသည် အလွန်အမင်း နယ်မြေ။
အကယ်၍ RSI စာဖတ်ခြင်းသည်အသက် ၃၀ အောက်ဖြစ်ပါကလုံခြုံရေးတွင်ပါ ၀ င်သည် oversold နယ်မြေ။
ဒါကြောင့်အတိအကျဘာလဲ အလွန်အမင်း အချက်ပြနှင့်အဘယ်ကြောင့်အသုံးဝင်သနည်း အလွန်စိတ်ဝင်စားသော Forex အတွဲသည်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားခံရသည်ဟု overbought signal တစ်ခုကသင့်အားပြောပြသည်။
၎င်းသည် အများအားဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုသည် အထက်သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းကို ကြုံတွေ့ရသည့် အချိန်ကာလတစ်ခုအတိုင်း ဖြစ်သည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊ စျေးနှုန်းသည် ဂငယ်ကွေ့မ၀င်ဘဲ တူညီသောဦးတည်ရာသို့ အကြာကြီး ဆက်လက်မသွားနိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့် RSI သည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အချိန်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန် ပို၍ ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ ဥပမာ RSI သည် ၇၀ ကျော်သို့ပြောင်းသွားပါကဈေးနှုန်းကျဆင်းခြင်းနီးပြီဖြစ်ကြောင်းပြနိုင်သည်။
Ergo, သင်လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စဉ်လက္ခဏာအဖြစ်အနက်ဖွင့်ဆိုပါကသင်ရွေးချယ်နိုင်သည် ရောင်းချ နှင့်သင်၏အမြတ်အစွန်းအတွက်သော့ခတ်
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်တစ် ဦး ကိုတွေ့မြင်လျှင် oversold ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပျက်ဖွယ်ရှိသည် signal ကို။ ဤအရာသည်သင့်အား“ ရှည်လျားစွာသွား” သင့်ကြောင်းညွှန်ပြနိုင်သည်။
၂ - ရွေ့လျားနှုန်း (MA)
Moving Average (MA) သည် စျေးနှုန်းလမ်းကြောင်း၏ ဦးတည်ချက်ကို အသိအမှတ်ပြုသောကြောင့် အကောင်းဆုံး Forex အညွှန်းကိန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကာလတို စျေးနှုန်းအတက်အကျ၏ အပိုဆူညံသံကိုလည်း ဖြတ်တောက်ပစ်သည်။
MA တွက်ချက်ခြင်းသည်လက်ရှိနှင့်ပေါ်ထွက်လာသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုဖော်ပြရန်သင့်အားများစွာကူညီနိုင်သည်။ ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားဖြင့်သင်္ချာညီမျှခြင်းများကို အသုံးပြု၍ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ရှာရန်နှင့်လမ်းကြောင်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်ဒေတာကိုအသုံးပြုသည်။
MA သည် အထက်ဖော်ပြပါ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့် စျေးနှုန်းပျမ်းမျှများကို အမှတ်အသားပြုပါသည်။ ပြီးတော့ အဆင့်တွေ ထွက်လာတယ်။ စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု ရေတိုရေရှည်သိသိသာသာစျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုများ၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုဖြတ်တောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရွေ့လျားသည့်ပျမ်းမျှအားထုတ်လုပ်သောအခါ Forex ကုန်သည်အများစုသည်အချိန်ကာလများစွာကိုအသုံးပြုကြသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးရွေ့လျားပျမ်းမျှအချိန်အပိုင်းအခြားများသည် ၅၀၊ ၁၀၀ နှင့်ရက်ပေါင်း ၂၀၀ ရွေ့လျားသည့်ပျမ်းမျှများဖြစ်သည်။
MA သည်အတော်အတန်အခြေခံကျသောနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူမှုကြောင့်အကောင်းဆုံး Forex ညွှန်းကိန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ရွေ့လျားပျမ်းမျှအညွှန်းကိန်းကိုမည်သည့်အချိန်ကာလနှင့်မဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤသည်ကသင့်အားခေတ်ရေစီးကြောင်းများကိုရှုမြင်ရုံသာမကမည်သည့် ဦး တည်ရာကို ဦး တည်သည်နှင့်ဖောက်သည်စျေးနှုန်း၏ပျမ်းမျှဖောက်သည်စျေးနှုန်းကိုလည်းထိုးထွင်းသိမြင်စေနိုင်သည်။
အောက်ဘက်သို့ ဦး တည်သွားသည့်အခါ MA သည်မျက်နှာကျက် (သို့မဟုတ်) ခုခံနိုင်သည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ အထက်သို့တက်နေသည့်အလားအလယ်တွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့် 'ထောက်ခံမှု' သို့မဟုတ်အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် MA ကို မည်သည့်အချိန်ဘောင်အတွက်မဆို တွက်ချက်နိုင်သည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ ရေတိုနှင့် ရေရှည် Forex လမ်းကြောင်းများကို ခန့်မှန်းရန် ၎င်းကို သင်အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင် ဂဏန်းများအားလုံးကို ပေါင်းထည့်ပါ။
စုစုပေါင်းနံပါတ်ကို2နဲ့ ခွဲပါ။
များစွာသော ဒေတာအတွဲများကို အသုံးပြု၍ MA သည် ပျမ်းမျှတန်ဖိုးကို ရှာဖွေသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ သင်သည် ၎င်းကို ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်းဤ forex ညွှန်ပြချက်သည်ခုခံနိုင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုအဆင့်ကိုသိရှိရန်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှေ့တန်းတွင် MA နှစ်မျိုးရှိသည်။ သူတို့သည် 'ရိုးရှင်းသောရွေ့လျားသည့်ပျမ်းမျှ' (SMA) နှင့် 'အဆရွေ့ရွေ့လျားသည့်ပျမ်းမျှ' (EMA) တို့ဖြစ်သည်။
SMA သည်တန်ဖိုးအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပြီး၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မကြာသေးမီကပြောခဲ့သောစျေးနှုန်းများကိုအဓိကထားသည်။
3 - ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားဖြင့်ပေါင်းစည်းခြင်းမတူကွဲပြားခြင်း (MACD)
MACD သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး Forex ညွှန်းကိန်းစာရင်းတွင်လူကြိုက်များသောကိရိယာဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားတစ်ခုသည်ရွေ့လျားနေသောပျမ်းမျှအားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်သောအရှိန်အဟုန်ကိုပြောင်းလဲသည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာတွင်ဤ Forex ညွှန်ပြချက်ကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ခုခံနိုင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုအဆင့်များနှင့် ပတ်သတ်၍ အကျိုးအမြတ်ရှိသောကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်လိမ့်မည်။
သတိမထားမိသူများအတွက်၊ 'ကွဲပြားခြင်း' သည် ရွေ့လျားပျမ်းမျှ2ခုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဝေးကွာသွားသည်ကို ညွှန်ပြနေသည်။ 'ပေါင်းစည်းခြင်း' သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆီသို့ ရွေ့လျားနေကြောင်းကို ပြသသည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှင်းပြထားသော MACD ညွှန်ကိန်းကိုကြည့်ပါ။
အချက်ပြလိုင်း ၎င်းသည် စျေးနှုန်းအရှိန်အဟုန်ပြောင်းလဲမှုများကို သရုပ်ဖော်ကာ အရောင်းနှင့်ဝယ်သည့်အချက်ပြမှုများတွင် အစပျိုးအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ အချက်ပြလိုင်းသည် MACD ၏ 9-period MA ဖြစ်သည်။
MACD လိုင်း ဤမျဉ်းကြောင်းသည်ရွေ့လျားနေသောပျမ်းမျှ ၂ ကြားရှိကွာဟမှုကိုတွက်ချက်သည်။ MACD လိုင်းသည် ၂၆ နှစ် MA အား ၁၂ ဆကာလ MA မှနုတ်ယူခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။
အဆိုပါ histogram: ဤလိုင်းသည် အချက်ပြလိုင်းနှင့် MACD အကြား ခြားနားမှုကို တွက်ချက်သည်။
MACD တွက်ချက်ရန် အချက်ပြလိုင်းနှင့် MACD လိုင်းကိုသာ အသုံးပြုသည်။
MACD ကို 'ဟစ်စတိုဂရမ်' အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည့်အတိုင်း ပြထားသည်။ signal နှင့် MACD လိုင်းများကြား ခြားနားချက်ကို သင်တွေ့ရပါမည်။
ဒါဟာအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ် ရောင်းချ MACD သည် အထက်မှ အချက်ပြလိုင်းကို ဖြတ်သွားပါက အချက်ပြပါ။ အောက်မှ ဖြတ်သွားပါက ၎င်းကိုaအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဝယ်ခြင်း အချက်ပြ
ဤ Forex ညွှန်ပြချက်သည်ရိုးရှင်းပြီးအားကိုးရသည်။ သင်လမ်းကြောင်း၏အားသာချက်နှင့်အလားအလာရှိသောအလှည့်အပြောင်းကိုမြင်နိုင်သည်သာမကအချက်ပြများသည်ရောင်းအားနှင့် ၀ ယ်ခြင်းမည်မျှခိုင်မာသည်ကိုလည်းပါတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဤသည်က MACD သည်စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်၏နောက်ဆုံးပေါ်ပုံဥပမာကိုရောက်သောအခါကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အားလုံး၏ကုန်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံး Forex ညွှန်းကိန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၄ - အဆရွေ့လျားပျမ်းမျှ (EMA)
အစောပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ MA သည် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသည် – မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဤညွှန်ပြချက်ကို ပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။ မကြာသေးမီ စျေးနှုန်းဒေတာ။ ထို့ကြောင့်အချို့လူများက EMA ကို“ အဆ” ဟုခေါ်ကြသည် ချိန်ခွင် ရွေ့လျားပျှမ်းမျှ '' ။
ကာလတိုတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသော EMA လမ်းကြောင်းညွှန်းကိန်းများသည် ၁၂ ရက်မှ ၂၆ ရက်အကြားသို့မဟုတ်တိုတောင်းသောသက်တမ်း ၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အတွင်းဖြစ်သည်။
ရေရှည်မဟာဗျူဟာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရာတွင်ကုန်သည်များသည်ရက် ၅၀ မှ ၂၀၀ အထိအညွှန်းများကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
အရေးကြီးသည်မှာမှတ်သားဖွယ်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုအတည်ပြုရန်နှင့်သူတို့၏တရားဝင်မှုကိုတိုင်းတာရန် EMA ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး Forex ညွှန်းကိန်းစာရင်းမှအခြားညွှန်းကိန်းများနှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်သည်။
5 - Bollinger ကြိုးနှင့်ချည်နှောင်
Bollinger Bands များသည် အတွင်းတွင် ကုန်သွယ်မှုပြုလေ့ရှိသော ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှု၏ စျေးနှုန်းအကွာအဝေးကို သရုပ်ဖော်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး Forex အညွှန်းကိန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ဤညွှန်ကိန်းသည် အချိန်နှင့်အမျှ Forex အတွဲတစ်ခု၏ မတည်ငြိမ်မှုနှင့် ဈေးနှုန်းများကို ဖော်ပြသည့် ကိန်းဂဏန်းဇယားတစ်ခုဖြစ်သည်။
'ခညျြအနှောများ' အချင်းချင်းပိုမိုနီးကပ်လာလေလေတူရိယာ၏မတည်ငြိမ်မှုနိမ့်လေလေဖြစ်သည်။ Ergo၊ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ဝေးကွာလေလေ၊ မတည်ငြိမ်မှုများလေလေဖြစ်သည်။
တစ် ဦး Forex pair တစုံလျှင် is ၎င်း၏ 'ပျမ်းမျှ' ကုန်သွယ်မှုအဆင့်များပြင်ပတွင်အရောင်းအ ၀ ယ် - Bollinger Bands သည်ဤအရာကိုသင့်အားပြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ရေရှည်တွင်စျေးနှုန်းအတက်အကျကိုတွက်ချက်ရန်ကြိုးစားခြင်းအတွက်အထူးအသုံးဝင်သည်။
အကယ်၍ စျေးနှုန်းသည်ထိပ်တီးဝိုင်းထက်ထပ်ခါထပ်ခါပြောင်းလဲသွားပါက၎င်းသည်ဘဏ္assetာရေးပိုင်ဆိုင်မှုသည် 'overbought' camp တွင်ရှိကောင်းရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အကယ်၍ စျေးနှုန်းသည်တီးဝိုင်းအောက်တွင်ရှိနေပါက၎င်းသည် 'oversold' camp တွင်ရှိနိုင်သည်ကိုညွှန်ပြသည်။
အလွန်အကျွံဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်ကိရိယာများထားရှိခြင်းသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ အခါ, စျေးကွက်ဝင်သို့မဟုတ်ထွက်ရန်။
6 - Ichimoku တိမ်တိုက်
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုသီးခြားဖယ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်သင်သည်စျေးနှုန်းများနှင့်လက်ရှိစျေးနှုန်းကိုလေ့လာရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါစို့။ ထိုကိစ္စတွင် Ichimoku တိမ်တိုက်သည်အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံး Forex အညွှန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Ichimoku တိမ်တိုက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းရှိအခြားသော Forex အညွှန်းကိန်းများကဲ့သို့ပင် Forex ကုန်သည်များအားခုခံနိုင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုအဆင့်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
သို့သော်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၎င်းသည်စျေးနှုန်းအရှိန်အဟုန်ကိုလည်းတန်ဖိုးဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Forex အချက်ပြမှုများ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌သင့်ကိုကူညီရန်။ ဇယားကိုကြိုက်သည့်ကုန်သည်များသည်မြေပေါ်သို့သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းကြသည်။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက ဂျပန် 'Ichimoku Kinko Hyo' က တကယ်တော့ 'တစ်ကိုယ်တည်း မျှခြေဇယား' ကို ဘာသာပြန်ပါတယ်။ တစ်နေရာတည်းတွင် ကျယ်ပြန့်သော အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အညွှန်းသည် ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ်၏ ခုခံမှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုအဆင့်များကို ခန့်မှန်းပေးသည်။ ထို့အပြင် စျေးကွက်လမ်းကြောင်းများနှင့် ၎င်းတို့သွားနိုင်သည့် ဦးတည်ချက်များကို ထောက်လှမ်းပါ။
မြူကိုရှင်းလင်းစေရန်အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Ichimoku တိမ်တိုက်ညွှန်ပြချက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရမည်။
Senkou Span A: ဤမျဉ်းကြောင်းသည်အဝါရောင်ရှိပြီး 'ဦး ဆောင် span A' ဟုရည်ညွှန်းသည်။ Kijun Sen နှင့် Tenkan Sen ကြားရှိအလယ်လမ်းဖြစ်သည်။ မျဉ်းကြောင်းသည်အချိန်အပိုင်းအခြား ၂၆ ခုကိုကြိုတင်တွက်ချက်။ တွက်ချက်ထားသည်။
Senkou Span B: ဤမျဉ်းကိုအများအားဖြင့်အပြာရောင်ရှိပြီး 'ဦး ဆောင် span B' ဟုရည်ညွှန်းသည်။ ဦး ဆောင် span B သည်ယခင် ၅၂ ကာလမှ midway အမှတ်၏ရွေ့လျားပျမ်းမျှဖြစ်သည်။ လိုင်းကိုအချိန် ၂၆ ကြိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည်။ တွက်ချက်မှုအရ - ၅၂ ကာလအမြင့်နှင့် ၅၂ ကာလနိမ့်သည်၊ ၂ ကိုစားသည်။
Tenkan-sen: ဤမျဉ်းကြောင်းသည် များသောအားဖြင့် အနီရောင်ဖြစ်ပြီး 'ကူးပြောင်းခြင်းမျဉ်း' ဟုလည်း ရည်ညွှန်းသည်။ Tenkan-sen ကို ယခင်ကာလ9ခု၏ အလယ်ဗဟိုအမှတ်၏ ရွေ့လျားနေသော ပျမ်းမျှအဖြစ် အကွက်ချထားသည်။
Kijun-sen: ဤမျဉ်းကြောင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး 'အခြေခံလိုင်း' ဟုရည်ညွှန်းသည်။ Kijun-sen သည် ယခင်ကာလ 26 ပတ်၏ အလယ်အလတ်မှတ်တိုင်၏ ရွေ့လျားပျမ်းမျှအဖြစ် ပုံဖော်ထားသည်။
Chikou Span: ဤမျဉ်းကြောင်းသည်အစိမ်းရောင်ရှိပြီးအများအားဖြင့် 'lagging span' ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ အတိတ်ကာလ ၂၆ ခုကိုစီစဉ်ထားပြီး senkou span သည် 'cloud' ၏အကြမ်းဖျင်းကိုဖန်တီးသည်။ senkou span B သည် Span A အောက်တွင်ရှိပါကတိမ်တိုက်သည်အစိမ်းရောင်ရှိလိမ့်မည်။ A သည် B ၏အထက်တွင်ရှိလျှင်အများအားဖြင့်တိမ်သည်အနီဖြစ်သည်။
အထက်မှဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Ichimoku Cloud ညွှန်ပြချက်ကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်စျေးကွက်၏ရာသီဥတုကိုလေ့လာနိုင်သည်။
တိမ်က နီနေတယ်ဆိုရင် အဲဒါက ဖြစ်နိုင်တယ်။ bearish လမ်းကြောင်း။
အစိမ်းရောင်မိုcloud်းတိမ်သည်ဥပမာအားဖြင့်ဖော်ပြသည် အီရန် လမ်းကြောင်း။
တစ် ဦး ကပါးလွှာသောမိုcloud်းတိမ်များသောအားဖြင့်လက်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်ဆုတ်ယုတ်ကြောင်းပြသသည်။
7 - Stochastic လှို
stochastic လှိုကိုအရှိန်အဟုန်အညွှန်းကိန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည်တိကျသောပိတ်ထားသောစျေးနှုန်းနှင့်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းရှိစျေးနှုန်းများအကြားနှိုင်းယှဉ်မှုကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် stochastic oscillator သည်၎င်း၏ခိုင်မာသောတိကျမှုနှင့်ရိုးရှင်းမှုအတွက်အကောင်းဆုံးသော forex အညွှန်းကိန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုသည် 'overbought' သို့မဟုတ် 'oversold' နယ်မြေအတွင်းသို့ကျသွားသည်ကိုဖော်ပြသောကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်း၏နောက်ထပ်ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ စာဖတ်ခြင်းသည်အသက် ၈၀ ကျော်ပါကစျေးကွက်ထဲသို့ကျရောက်သွားသည် အလွန်အမင်း အမျိုးအစား။ အကယ်၍ စာဖတ်ခြင်းသည်အသက် ၂၀ အောက်ဖြစ်ပါကဤသည်ကိုညွှန်ပြသည် oversold ဈေးကွက်။
သတိပြုရမည်ဆိုလျှင်လမ်းကြောင်းသည်တကယ်အားကောင်းနေပုံရသည်ဆိုပါကစျေးကွက်ပြင်ဆင်မှုသည်အလွန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်သတိဖြင့်နင်းနယ်နေသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်သင်၏တွေ့ရှိချက်များအားမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရန်အတွက် Forex အညွှန်းကိန်းများကိုအတူတကွပေါင်းစပ်သင့်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, stochastic လှိုအားကြီးသောဝယ်ရန်နှင့်ရောင်းအချက်ပြမှုများကိုကမ်းလှမ်း Forex အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သောအခါမယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်သည်။ Forex ညွှန်ပြချက်သည် RSI နှင့်အတူကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
8 - ဖီဘိုနာချီစံချိန်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုန်သည်တွေကစျေးကွက်ကိုပြန်လည်ဆွဲထုတ်ဖို့ (သို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းသစ်အတွက်ယာယီခေတ္တရပ်တန့်ခြင်း) ကိုတွက်ချက်ရာတွင်ကူညီခြင်းကြောင့်ဖီဘိုနာချီစံချိန်စံညွှန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး Forex ညွှန်းကိန်းစာရင်းဖြစ်သည်။
ဆုတ်ယုတ်မှုများမကြာခဏမြင့်တက်လမ်းကြောင်းသစ်စီးဖို့ရှာနေကုန်သည်များအဘို့အခွင့်အလမ်းများဝယ်ယူဖန်တီးပါ။ အမှန်ကတော့, Fibonacci ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်စျေးကွက်အတွင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြောင်းပြန်ပြောင်းခြင်းကိုတိုင်းတာရန်ဆွဲဆောင်သောပုံဆွဲကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤ forex ညွှန်ပြချက်သည်အမျိုးမျိုးသောစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းအဆင့်ဆင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရရှိသောအမျိုးမျိုးသောစျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်မှုအဆင့်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အဆင့်တစ်ခုချင်းစီသည်စျေးကွက်နှစ်ခုကွဲပြားသောအမှတ်နှစ်ခုကြားတွင်ရှိသောရာခိုင်နှုန်းကိုတိုင်းတာသည်။
'တိမ်မြုပ်နေသော retracement' အတွက် 23.6% နှင့် 38.2% အကြား- လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားပြီး အားကောင်းသောလမ်းကြောင်းကို ညွှန်ပြသည်။
'deep retracement' အတွက် 61.8% နှင့် 78.6% အကြား - ရေပန်းစားနေသော ဈေးကွက်များသည် ရေတိမ်ပိုင်း retracement ထက် အလျင်ထက် နိမ့်သော်လည်း၊
Fibonacci retracement ကို အမြင့် နှင့် အနိမ့် ကဲ့သို့ အရေးကြီးသော စျေးနှုန်းအချက် နှစ်ခုကြားတွင်2မှတ်ကြား အဆင့်များကို ပုံဖော်နိုင်သည်။
stop-loss order ကို ဖန်တီးတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ အောက်တွင် ပြီးခဲ့သည့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကအထက်သို့တက်၏အနိမ့် - နှင့် ပိုမိုမြင့်မား ယခင်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုထက်အောက်ဘက်လမ်းကြောင်းထက်မြင့်မားသည်။
မြင့်မားသောလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုပေါ်လာသည်နှင့်အမျှသင်သည်နောက်ဆုံးကြီးမားသောပြိုင်ပွဲမည်မျှလွတ်သွားသည်ကိုခန့်မှန်းရန် Fibonacci ပြန်ပြောင်းကိုအသုံးချနိုင်လိမ့်မည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ဖီဘိုနာချီဂ်ကိုပြန်လည်ရယူခြင်းသည်ဖော်ထုတ်ရန်အကောင်းဆုံး Forex အညွှန်းတစ်ခုဖြစ်သည် အခါ, စျေးကွက်ဝင်ရန်။ 'stop-loss' နှင့် 'take-profit' အမိန့်များ ချမှတ်ရန် မည်သည့်နေရာတွင် ကောင်းသောအချက်ကို သင်ပိုမိုနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၉ - ပျမ်းမျှလမ်းညွှန်ညွှန်းကိန်း (ADX)
ပျမ်းမျှ Directional အညွှန်းကိန်း, ဒါမှမဟုတ် ADX, တစ် ဦး အထူးသဖြင့်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခု၏အလားအလာအစွမ်းသတ္တိကိုတည်ထောင်ရန်အတွက်များစွာသော forex ကုန်သည်များကအသုံးပြုသည်အခြားကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
Forex (သို့) ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုနှင့် ပတ်သက်သော အခက်ဆုံးအရာတစ်ခုမှာ လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခု၏ ဦးတည်ရာကို မှန်ကန်စွာ ခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ADX တွင်၊ ADX (အနက်ရောင်)၊ အပြုသဘော (အစိမ်းရောင်) နှင့် အနုတ်လက္ခဏာ (အနီရောင်) လမ်းညွှန်အညွှန်းကိန်းများ အပါအဝင် အညွှန်း ၃ ခု ရှိပါသည်။
ဒီ tool ၏အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်တစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ်အားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်အစွမ်းထက်ရှိမရှိဖော်ပြသည်။ ADX သည် ၀ မှ ၁၀၀ အထိရှိနိုင်သည်။ ၂၅ နှစ်ကျော်သောမည်သည့်အရာကမဆိုပိုမိုပြင်းထန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ဦး တည်နေသည်။
ရွေ့လျားနေသောပျမ်းမျှအားအခြေခံ၍ 14 ရက်ကြာအချိန်ဘောင်တစ်ခုကျော်ဖြတ်သန်းလေ့ရှိပြီး ADX သည် ၎င်း၏ဦးတည်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခု၏ခွန်အားကိုအာရုံစိုက်သည်။ အစိမ်းရောင်မျဉ်းကြောင်း (အပြုသဘောဆောင်သော ဦးတည်ချက်) သည် အနီရောင် (အနုတ်လက္ခဏာ ဦးတည်ချက်) အထက်တွင် ရှိနေပါက – လမ်းကြောင်းသည် အားကောင်းဖွယ်ရှိသည်။
သင်သည် ADX ကို 14 ရက်အချိန်ဘောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ဇယားကို စျေးနှုန်းအကွာအဝေး၏ စည်းကမ်းချက်များအရ အနည်းနှင့်အများ ကမ်းလှမ်းရန် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။
10 - စံသွေဖည်ခြင်း (SD)
စံသွေဖည်မှုသည် ပြန့်ကျဲခြင်း၏ တွက်ချက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိရိယာသည် အခြားသော အညွှန်းကိန်းများနှင့် ယှဉ်တွဲအသုံးပြုသောအခါတွင် ကြီးမားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင်းဆုံး Forex အညွှန်းကိန်း ၁၀ ခုစာရင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကုန်သည်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသိပေးရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ရန် အမှန်တကယ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဤအထူးသဖြင့် နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာသည့်ကိရိယာသည် စျေးကွက်၏စျေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုဗျူဟာတွင် ၎င်းကို ထည့်သွင်းသင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။
ဤ Forex အညွှန်းကိန်းသည် အသစ်အသစ်များအတွက် ရိုးရှင်းပါသည်။ ဒါပေမယ့် အဆင့်တိုင်းအတွက် အစွမ်းထက်တယ်။ စံသွေဖည်မှုသည် သင့်အန္တရာယ်/ဆုလာဘ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
သင်ကြည့်ရှုနေသည့် ကာလအတွက် 'ပျမ်းမျှအပိတ်စျေးနှုန်း' ကို ရှာဖွေပါ - ဥပမာ၊ ကာလ 20။
ကာလတိုင်းအတွက် သွေဖည်မှုကို စစ်ဆေးပါ - ၎င်းသည် အပိတ်တန်ဖိုး အနှုတ် ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။
သွေဖည်မှုတိုင်းအတွက် စတုရန်းကိုရှာပါ - ထို့နောက် ထိုနှစ်ထပ်သွေဖည်မှုများကို ထည့်ပါ။
ရရှိသော ပေါင်းလဒ်ဖြင့် သွေဖည်သော အရေအတွက်ကို ပိုင်းခြားပါ။
ထို့နောက် အဆင့်4မှရရှိသောတန်ဖိုး၏ နှစ်ထပ်ကိန်းအဖြစ် SD ကို ထုတ်ပေးပါ။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီညွှန်ကိန်းကစျေးနှုန်းတွေပျမ်းမျှကနေဘယ်လောက်ထိလွဲသွားတယ်ဆိုတာကိုတွက်ချက်ပေးတယ်။ အချိန်အပိုင်းအခြားသတ်မှတ်ချက်များအရလူများစွာသည်အစွန်းရောက်မှုများကြားတွင်ထိုင်နေသည့်ပုံမှန်ကာလ ၂၀ ကာလသတ်မှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်ကြသည်။
ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ အချက်ပြမှုများစွာကိုထုတ်ပေးသော Forex အညွှန်းကိန်းတစ်ခုရှိခြင်းသည် ကိစ္စများကို ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် သင်လုပ်နိုင်တဲ့ အမြတ်တွေကို ထိခိုက်စေတယ်။
အကောင်းဆုံး Forex အညွှန်းကိန်းများလေ့လာနည်း
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး forex ညွှန်းကိန်းတွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များကြောင့်အနည်းငယ်စိတ်ဖိစီးနေပါကစိတ်ပူစရာမလိုပါ။
forex ကုန်သည်များကိုကူညီရန်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများစွာရှိသကဲ့သို့စတင်သူများအတွက်လည်းရာနှင့်ချီရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်အား Forex အညွှန်းကိန်းများကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုနည်းကို လေ့လာရန် ကူညီပေးပါမည်။
အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်အကောင်းဆုံး Forex ညွှန်းကိန်းများ၌သင်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားရန်နည်းလမ်းအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်မည်သည့်ဘာသာရပ်နှင့်မဆိုအွန်လိုင်းသင်တန်းတစ်ခုရှိသည်။ Forex ညွှန်းကိန်းကွဲပြားခြားနားသည်မဟုတ်။
Forex ညွှန်းကိန်းများအတွက်အွန်လိုင်းသင်တန်းတစ်ခုကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းအင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာယေဘုယျအားဖြင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုလေ့လာရန်ရည်ရွယ်သည့်သင်ခန်းစာများစွာကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ဒီနေရာမှာလေ့လာပါ2ကုန်သွယ်ရေးမှာငါတို့အမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသည် Forex သင်တန်းများနောက်ဆုံးကုန်သွယ်မှုညွှန်းကိန်းသင်တန်းအပါအ ၀ င်အသုံး ၀ င်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုယိုထုပ်ထားသည်။
Forex ညွှန်းကိန်းများပေါ်တွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာအခမဲ့ demo account များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
သတိမထားမိသောသူများအတွက်, အွန်လိုင်း Forex ပွဲစားများသည်ဖောက်သည်များအားငွေစက္ကူများဖြင့်အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကိုပေးသည်။
သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုစီသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာစျေးကွက်အခြေအနေများကို အတုယူပါသည်။ ပြီးတော့ သင့်စိတ်နှလုံးရဲ့ အကြောင်းအရာတွေအထိ သင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစွမ်းရည်ကို သင်လေ့ကျင့်နိုင်မှာပါ။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ မင်းရဲ့အရင်းအနှီးကို စွန့်စားစရာမလိုပါဘူး။
အချိန်ကုန်လာသည်နှင့်သင်အမှန်တကယ်ငွေဖြင့် Forex ကိုစတင်ရောင်းဝယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုပါကများသောအားဖြင့် 'live account' ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းနိုင်သည်။
မည်သည့်အချက်ဖြင့်သင်၏အားသာချက်ကိုအကောင်းဆုံး Forex ညွှန်းကိန်းများအသုံးပြုရမည်ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်လိမ့်မည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားသင်ယူကြသည်။ 'kinesthetic' အမျိုးအစားတွင်ပါဝင်သူများသည် 'လုပ်ခြင်း' ဖြင့်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဆိုလိုသည်၊ သူတို့သည်သရုပ်ပြအကောင့်ကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။
သို့သော်သင်သည်ဘာသာစကားသင်ယူသူဖြစ်လျှင်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်အကောင်းဆုံး Forex ညွှန်းကိန်းများကိုလေ့လာရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏လက်ချောင်းထိပ်တွင် Forex trading စာအုပ်ရာပေါင်းများစွာရှိသည်
သမားရိုးကျ စက္ကူစာအုပ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် သို့မဟုတ် အော်ဒီယိုစာအုပ်ကို ဖတ်လိုသည်ဖြစ်စေ - သင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုကို ညှို့ယူနိုင်သော စာအုပ်တစ်အုပ် ရှိသင့်သည်။
သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသောအကောင်းဆုံးစာအုပ်အချို့ကိုစာရင်းပြုစုထားပြီးယင်းတို့အားလုံးသည် forex အညွှန်းများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရာများဖြစ်သည်။
Brian Shannon မှ Multiple Timeframes ကိုအသုံးပြု၍ နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း။
John Bollinger မှ Bollinger Bands ရှိ Bollinger။
John Murphy မှ Financial Markets ၏ နည်းပညာပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
Anna Coulling မှ Beginners အတွက် Forex
Jack Schwager မှ နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုတွင် စတင်ခြင်း
Steve Nison မှ ဂျပန် မီးချောင်းပုံဆွဲနည်းများ။
Thomas Bulkowski မှ ဇယားပုံစံများ စွယ်စုံကျမ်း။
Martin Pring မှ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ရှင်းပြသည်။
သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး Forex အညွှန်းကိန်းများလမ်းညွှန်သည် စတင်သူများအတွက် ရည်ရွယ်သော Forex အရောင်းအ၀ယ်စာအုပ်များစွာရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဒါပေမယ့် အလွန်တိကျတဲ့ နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်တွေကို အခြေခံပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၂၀၀၀ အကောင်းဆုံး Forex အညွှန်းကိန်းများ - နောက်ဆုံးစဉ်းစားချက်များ
ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် Forex အညွှန်းကိန်းများအရကောက်ပဲသီးနှံ၏မုန့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးအုပ်ထားသည်။ tool တစ်ခုစီသည်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာကိုမဆိုကောင်းမွန်စွာပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မည်
Forex ညွှန်းကိန်းများကိုပုံမှန်အသုံးပြုသောမည်သူမဆိုနည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အချိန်ယူနိုင်သည်ဟုသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်ကချိတ်ဆွဲရတခါ, ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ကုန်သွယ်ရေးလောက၌စတင်နေပြီဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံး Forex ညွှန်းကိန်းများကိုမည်သည့်နေရာမှစတင်သင်ယူရမည်ကိုမသေချာပါကသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအကူအညီများအားလုံးရှိနိုင်သည်။
အခမဲ့ သရုပ်ပြအကောင့်ကို သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဆိုသည်ကို သိရန် သင့်အွန်လိုင်းပွဲစားနှင့် စစ်ဆေးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် လက်တွေ့ဘဝတွင် ထင်ဟပ်နေသည့် စျေးကွက်အခြေအနေများတွင် ညွှန်းကိန်းများကို ဆုပ်ကိုင်ထားရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဘာသာစကားလေ့လာသူဖြစ်ပါက၊ စာအုပ်များအပါအဝင် ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းအစုအဝေးများကို အွန်လိုင်းတွင် ရှာဖွေနိုင်ပြီး အသစ်အသစ်များအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ Learn2Trade forex သင်တန်းများ။ အကောင်းဆုံးဟုယူဆထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့ Forex အချက်ပြမှုများအဖွဲ့ကိုလည်း သင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ Forex အချက်ပြမှုများကြေးနန်း ဝဘ်ပေါ်ရှိအဖွဲ့။ ဒါက သင့်အိမ်ရဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကနေ ကြိုးတွေကို သင်ယူနိုင်စေတယ်။
ဟုတ်တယ်။ အကယ်၍ သင်၏ကုန်သွယ်ရေးရွေးချယ်မှုသည်ဖောက်သည်များအား demo account များကိုကမ်းလှမ်းပါက Forex စက္ကူဖြင့်ကုန်သွယ်နိုင်ပြီးအကောင်းဆုံး Forex ညွန်ကိန်းများပေါ်တွင်လေ့ကျင့်နိုင်သည်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းအစက်အပြောက်များအတွက်အကောင်းဆုံး Forex ညွှန်ပြချက်ကဘာလဲ?
Moving Averages သည် Forex လမ်းကြောင်းကုန်သည်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားသူများမှာမူ MACD နှင့်ဆွေမျိုးအင်အားညွှန်းကိန်း (RSI) တို့ဖြစ်သည်။
ငါ Forex ညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြု။ ကြွယ်ဝရနိုင်မလား?
အဖြူအမည်း အဖြေမရှိပါ။ Forex အညွှန်းကိန်းများသည် သင့်အား တစ်ဦးချင်း ငွေမရှာနိုင်သော်လည်း၊ အကောင်းဆုံး Forex အညွှန်းကိန်းများကို လေ့လာခြင်းသည် မှန်ကန်သော ကုန်သွယ်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင် အောင်မြင်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို သေချာပေါက် တိုးတက်စေပါသည်။
ငါအကောင်းဆုံး Forex ညွှန်းကိန်းကိုလေ့လာရန်အိမ်မှသင်တန်းကိုတက်နိုင်သလား?
ဟုတ်ကဲ့ သေချာပေါက် လုပ်နိုင်မှာပါ။ စတင်သူများအတွက် အွန်လိုင်းသင်တန်းများ အများအပြားရှိသည်။ ဤနေရာတွင် Learn2Trade တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရွေးချယ်ရန် Forex သင်တန်းများစွာရှိသည် - ထို့ကြောင့် သင့်အိမ်၏ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှ သင်သင်ယူနိုင်သည်။
Forex ညွှန်ကိန်းများနှင့်ပတ်သက်။ အကောင်းဆုံးပညာရေးစာအုပ်ကဘာလဲ?
Forex ညွှန်ကိန်းများနှင့်ပတ်သက်။ ပညာရေးစာအုပ်များ၏အမှိုက်ပုံရှိပါတယ်။ ညွှန်ကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တိတိကျကျမဖော်ပြထားသော်လည်း Forex trading ၌နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အကောင်းဆုံးစာအုပ်နှစ်ခုမှာ '' ဘဏ္Murာရေးစျေးကွက်များ၏နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း '- John Murphy မှ' နှင့် 'Martin Pring မှ' နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ခြင်းရှင်းလင်းချက် 'ဖြစ်သည်။